Françis , Zazalahy 12 taona Very 4 andro tany Toamasina fa hita teto Antananarivo
Ny tambajotram-piarahamonina no nampifandray ilay nampiantrano ilay zazalahy 12 taona sy ny ray amam-dreniny.
Zazalahy kely avy any Toamasina i Françis no very teto an-drenivohitra efa hatramin’ny alahady. Omaly maraina vao tafakatra teto Antananarivo ny ray aman-dreniny haka azy. Nilaza ilay zaza tamin’ireo sendra azy fa nentin’ny dadatoany mba hipetraka aty aminy eto Antananarivo. Mody nirahiny nividy sigara anefa ilay zaza, ny alahady teo, avy eo nanjavona ilay olondehibe narahiny. Raha ny filazan’ny vehivavy iray eny Andohatapenaka izay nanaiky hiantranoany afak’omaly hariva : “Tany amin’ireo izay antra azy io zazalahy io no natory ny alahady hariva, torak’izany koa ny alatsinainy. Nisy mpivarotra vy avy eny Itaosy niangavy ahy mba hipetrahan’ilay zaza, noho izaho efa nipetraka tany Toamasina no anton’ny fitalahoana”, hoy i Pelandroy, ilay samaritanina tsara fanahy nanaiky hatorian’ilay zaza. Napariakany tamin’ny alalan’ny facebook avy hatrany ny mombamomba ilay zaza sy ny laharam-pindainy ka teo no nampifandraisin’ireo mpiara-monina tamin’ny ray aman-dreniny ny talata alina teo.
Mpangala-jaza fa tsy dadatoany
Raha ny filazan’ny mponin’i Toamasina, efa sasatra ny nikaroka ity menaky ny ainy ity manerana ny Renivohitry ny Faritra Atsinanana ireo fianakaviany avy any Ankirihiry, ka nahatsiaro filaminan-tsaina vao naheno fa velon’aina soamantsara ilay zaza. Nifampiantso avy hatrany tamin’ilay tovovavy nampiely ny vaovao ireo nahitan’i Francis Lesabotsy masoandro ary nandray taksibrosy avy hatrany ny talata alina tamin’ny 9 ora ireo ray aman-dreniny ho aty Iarivo.
“Akory lahaly. Tsy dadatoany izany fa olon-tsy fantatra no nitondra io zanakay io, tsy fantany akory izany. Efa hatramin’ny sabotsy teo tamin’ny 10 ora atoandro izy io no tsy hita. Mitohy ny fitarainana efa napetrakay any amin’ny manampahefana mikasika io lehilahy nangala ny zanakay io. Faly izahay mahita ny menakiniainay velona soamantsara amin’izao vao mifankahita izao”, hoy i Felix Lesabotsy, rain’i Francis sy ny zokiny vavy roa raha niresaka tamin’ny mpanao gazety, omaly tamin’ny 9ora maraina raha nahita tava ny zanany.
Andrasana noho izany ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana mikasika ilay nitondra ka nanary ity zaza ity, raha ny lalàna velona mantsy tsy miandry fitoriana raha zaza tsy ampy taona no iharan’ny herisetra toy izao fa tonga dia mirotsaka an-tsehatra ny polisy misahana izany.